म एक SOB (र यसको गर्व) हुँ! | Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 9, 2006 शुक्रवार, अक्टुबर 24, 2014 Douglas Karr
ओहो! म एक एसओबी हुँ। Successful र Outsouts Bलग (जीवाणु) SOB मा लिज स्ट्रॉस द्वारा शुरू गरिएको एक उत्कृष्ट कार्यक्रम हो सफल ब्लग.
यदि तपाई अनुभवी ब्लगर वा नयाँ ब्रान्ड हुनुहुन्छ भन्नेले फरक पार्दैन ... सफल ब्लग एक उत्तम स्रोत हो। र SOBs मा उनको ब्लगको स्वादको साथ को बहस गर्न सक्छ? म होइन!
धन्यबाद, सफल ब्लग!
टैग: लिज स्ट्रसsobसफल र उत्कृष्ट ब्लगसफल र उत्कृष्ट ब्लगरसफल ब्लग
डिसे 10, 2006 मा 2: 10 AM
तपाईको ब्ल्ग पढ्ने मानिसहरूलाई उत्तम जानकारी ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद। हामीलाई वास्तवमै चाहिने कुरा यही हो। यही कुराले तपाईंलाई उत्तम क्रमबद्धको SOB बनाउँछ! अब म तपाईंलाई एक BAD ब्लगर बनाउनु पर्छ। 🙂
म निश्चित छु कि मैले तपाईंलाई यो सुन्दर नियमित आधारमा कल गरेको थियो ... र अब तपाईंसँग यसका लागि पुरस्कार छ। बधाई छ।
पाठकहरूलाई नोट: आयरिश र मैले इन्डियानापोलिस स्टारमा सँगै काम गरेका छौं। सम्भवतः सबैभन्दा बुद्धिमानी र विवेकी व्यक्तिहरू मध्ये एक मसँग काम गर्न पाउँदा खुशी थिए।